बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू - Canary Whistleblowing System: Most Effective Fraud Detection Tools
Home » बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
ह्विसलब्लोअर प्रणाली भनेको के हो?
ह्विसलब्लोअर प्रणाली एक सेवा हो जसले कर्मचारी, उपयोगकर्ता, विक्रेता वा जनतालाई बेनामी रूपमा सङ्गठन भित्रका अनैतिक वा गैरकानुनी व्यवहार वा गलत कामको रिपोर्ट गर्न सक्षम पार्छ।
क्यानरी ह्विसलब्लोअर प्रणालीको ह्विसलब्लोअर हटलाइनद्वारा उपलब्ध गराइने लाभहरू के के हुन्?
हाम्रो ह्विसलब्लोअर हटलाइन दुराचार, अनुपालन नियम र आचार संहिताको उल्लङ्घन, भ्रष्टाचार, ठगी, उत्पीडन, हिनामिना, चोरी, स्वास्थ्य र सुरक्षा उल्लङ्घन, ढाकछोप र भाइ-भतिजावाद सम्बन्धी कुनै पनि मामिलामा हाम्रो प्रशासकीय निकायलाई रिपोर्ट गर्न अनुमति दिनको लागि स्थापित गरिएको छ।
हटलाइन कसले प्रयोग गर्न सक्छन्?
हटलाइन हाम्रा कर्मचारी, हाम्रा विक्रेता र हाम्रा ग्राहकहरूद्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
रिपोर्टको के हुनेछ?
प्रशासकीय निकायले रिपोर्टको समीक्षा गर्नेछ र कुनै दुराचारको सङ्केतलाई आवश्यक कार्यवाही कार्यान्वयन गरेर सम्बोधन गरिनेछ।
के ह्विसलब्लोअर वास्तवमै बेनामी रहनेछ?
हो। सख्त गोपनीयता नियम लागू हुन्छ। साथै, हाम्रो प्रणालीले रिपोर्ट बेनामी रूपमा बनाउन अनुमति दिन्छ।
तपाईं मेरो व्यक्तिगत डाटा कसरी राख्नुहुन्छ?
निम्न अवस्थामा तपाईंको डाटा मेटाइनेछ:
क्यानरीको ग्राहकको अनुरोधमा
क्यानरी अपरेटर र हाम्रो ग्राहक बीचको सम्झौताको अन्त्यमा
व्हिसलब्लोअरले आफ्नो व्यक्तिगत डाटा उपलब्ध गराएको अवस्थामा ह्वाइटलब्लोअरको अनुरोधमा
के ह्विसलब्लोअरका लागि कुनै पुरस्कार छ?
होइन। कुनै पनि मामिला रिपोर्टिङका लागि कुनै पुरस्कार छैन।
के ह्विसलब्लोअरले मेरो रिपोर्टमा फलो अप गर्न सक्छ?
हो। ह्विसलब्लोअरसँग खाता सिर्जना गर्न र उपलब्ध भएको समयमा अतिरिक्त जानकारी थप्न विशेषाधिकार छ। ह्विसलब्लोअरले यस इन्टरफेसको माध्यमबाट ह्विसलब्लोइङ टोलीसँग सञ्चार गर्न सक्छ।
क्यानरी व्हिसलब्लोइङ प्रणाली द्वारा प्रदान गरिएका च्यानलहरू के हुन्?
एक ह्वाइटलब्लोअरले हामीले प्रदान गर्ने सुरक्षित सात च्यानलहरू, जुन वेबसाइट फारम, टेक्स्ट म्यासेज, फोन/फ्याक्स, हुलाक मेल, मोबाइल एप, इमेल, र अनलाइन च्याटहरू मार्फत रिपोर्ट पठाउन सक्छ।
क्यानरी व्हिसलब्लोइङ प्रणाली कत्तिको सुरक्षित छ?
हाम्रो सर्भरले क्रिप्टोग्राफ प्रोटोकलको रूपमा SSL प्रमाणपत्र प्रयोग गर्दछ क्यानरी व्हिसलब्लोइङ प्रणाली र ग्राहक वा ह्विस्टलब्लोअर बीच सञ्चार सुरक्षित गर्न। सुरक्षाका थप तहहरू थप्नको लागि, तपाईंको डाटा इन्क्रिप्ट गरिएको छ।
म क्यानरी व्हिसलब्लोइङ प्रणालीको लागि मूल्य निर्धारण प्रस्ताव कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
मूल्य निर्धारण प्रस्ताव को लागी, हाम्रो सम्पर्क पृष्ठ मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
सम्पर्क केन्द्रमा रिपोर्ट गरिएको जानकारीमा कसको पहुँच छ?
जानकारी हाम्रो ग्राहकहरु द्वारा अनिवार्य कर्मचारीहरु लाई मात्र पठाइन्छ। क्यानरी व्हिसलब्लोइङ प्रणालीले कुनै पनि परिस्थितिमा ग्राहकको भित्र वा बाहिर कुनै पनि अन्य व्यक्तिलाई कुनै पनि जानकारी फर्वार्ड गर्दैन।
हाम्रो ग्राहकबाट कुनै पनि सहमति बिना संगठन।
क्यानरी व्हिसलब्लोइङ प्रणाली कभरेज क्षेत्र के हो?
हाम्रा कार्यालयहरू इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्याण्डमा अवस्थित छन्। हाल हामी दक्षिणपूर्वी एशिया क्षेत्रहरूमा सेवा गर्छौं।
यद्यपि, यसले अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि सेवा दिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दैन।
क्यानरी व्हिसलब्लोइङ प्रणाली कुन भाषाहरूमा उपलब्ध छ?
हाल, हामी चार भाषाहरू सेवा गर्छौं: अंग्रेजी, इन्डोनेसियाली, मलेशियन र थाई। यद्यपि, यसले अन्य भाषाहरूलाई पनि सेवा दिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दैन।
के तपाईलाई थप जानकारी चाहिन्छ?
हाम्रो सल्लाहकारलाई सम्पर्क गर्नुहोस्